Waterpark "Caribia" e Moscow, incazelo, indawo, kanye nokubuyekeza
Ukuze nomuzwa ku indawo libalele Caribbean, zibhukude amagagasi mnene, uphumule emphemeni esihlalweni ukhululekile ogwini olunesihlabathi, akusho ukuthi ukuya ogwini lalo ezikude.
Amaholide eCaribbean eMoscow
Manje ungakwazi, ngaphandle kokushiya edolobheni ezinomsindo, vakashela amanzi ipaki "Caribia" eMoscow. Guest Izibuyekezo amanzi ipaki anikela ilwazi ngalokho iholidi elimangalisayo elilindele wena, umkhaya wakho nabangane nje a drive ngomzuzu-20 kusukela enkabeni yedolobha.
Lapha, ngaphansi Dome ingilazi, okudlulela phezu indawo amanzi, umuntu ecabanga ukuthi ngempela uhlala resort Ogwini lolwandle. Sisindvo ezihlukahlukene zokuzijabulisa, ugibele okuthakazelisayo futhi ukuzijabulisa izivakashi abasebasha, cuisine esiphundu kusukela labapheki lokuphekiwe zendawo amathilomu ukwenza isikhungo wokuzilibazisa real okwehla esiphundu. Ekuhlaba umxhwele izivakashi namanzi ukuklanywa epaki - ke lihlotshiswe imisebenzi umculi Olga Motovilova kuyiphi lusuka ukukhanya nokushisa.
Waterpark "Caribia" - iholide nomndeni wonke
Lokhu epaki yokuzijabulisa wavula muva nje, kodwa wathola uthando Muscovites. A ezihlukahlukene imisebenzi amanzi awekho ngaphansi kuka resort upscale. Kubantu abadala kanye nezingane amachibi eziningana: ngamaza iziphethu, izingane, ephephile ngisho ababhukudi abancane kunabo bonke, amanzi ukuphumula endaweni "umfula oyivila" kubhavu esishisayo phezu imitha elilodwa namabhati Ngokuphambene ukujula.
Pools amanzi ipaki wagcwala amanzi, aphethwe uhlelo multi-ukwelashwa nge ubuchwepheshe bamuva yinkampani German Kuhle Water Technology. Inxanxathela yokuhlanza inqubo akagcini ngisho umzuzu, futhi izivakashi ukushiya Izibuyekezo rave mayelana amanzi ipaki "Caribia" njengoba omunye amanzi ehlanzekile komuzi.
Ukuze bamazwe, abadala nabasha
Izivakashi isikhungo linikeza amanzi amaslayidi yinkimbinkimbi nelula. "Caribia" - epaki amanzi, lapho zonke isivakashi, kungakhathaliseki ukuthi umuntu mdala Ungazama nesibindi sabo. Kukhona olufakiwe amaslayidi eziningana:
"Freefall" - slide nge encane, 25⁰, engela Uzalo bushelelezi, okuyinto enkulu kulabo abazizwa ugibele akuzona beqiniseka kakhulu.
"Black Hole" - a emazombezombe Umhubhe ukuphakama 9 amamitha kanye nobude obungamamitha angaphezu 8 amamitha. Kuyinto izifele imiphefumulo abanesibindi ngubani asesabi izikhala ivaliwe.
"Bodislayd" - umbukiso kuka 8 amamitha eliphezulu, nge trajectories yinqaba kubalandeli ephezulu ijubane ekwehleni.
"Multislide" - slide for fun jikelele. Uma eza epaki amanzi "Caribia" enkampanini enkulu, uthanda ke lokhu Luhambo. Ngokusho amathrekhi eziningana parallel lengashelela kokubili ndawonye. isivinini yesivalo kakhulu - ezingaphezu kuka-40 km ngehora, ukuze kungabikho muntu ngeke be bored!
Extremals Wabasaqalayo abaneminyaka engu 4 Waterpark inikeza ukugibela leli "pirate" entabeni.
Insimu play asebenzayo
Ngaphezu imisebenzi yamanzi, "Caribia" amanzi epaki Perovo, izipesheli nezinye izinhlobo imisebenzi yangaphandle ezifana table tennis, ukuyodlala i-bowling, amabhiliyade.
Ukuze umdlalo table tennis emidlalweni indawo epaki amanzi esungulwe amatafula 20, Bowling izivakashi elinde 12 amathrekhi professional, ifakwe izakhiwo zesimanje futhi ifakwe i uhlelo okuzenzakalelayo, izikolo kubalwa. Ezinganeni ifakwe ithrekhi obukhethekile amabhampa othomathikhi. Ngenxa yalaba amadivayisi, umdlalo uba kufinyeleleke futhi ezithakazelisayo ngisho izingane.
Esitezi efanayo egumbini bowling ingenye imidlalo esithakazelisa kakhulu - amabhiliyade. Ehholo kukhona amatafula ezinhlanu. Ngemuva kwabo ungadlala umdlalo we amabhiliyade Russian noma eMelika.
Lo mdlalo maphakathi izingane ungadlala emoyeni hockey, zibone ngeso lengqondo ngesikhathi zokulawula indiza noma ukushayela ibhayisikili uhlanga futhi uthole neminye imisebenzi okuthakazelisayo.
Bath nalelo ukunambitheka
"Caribia" - amanzi ipaki, esiyingqayizivele hhayi kuphela indawo yayo amanzi, kodwa futhi ehlukahlukene yasakazwa amasevisi eyengeziwe. Kukhona zokugeza ezimbalwa yobuhlanga evulekile, ngamunye ngendlela yalo has a ekuvuseleleni nokwelashwa umphumela emzimbeni womuntu.
Ukuqeda ukungezwani nokucindezeleka, okuyinto azinakugwenywa ukuze izakhamuzi muzi kungaba okugeza Russian noma sauna Finnish, kushintshana abhanqiwe nge font cool noma eshaweni.
Japanese okugeza o-Furo ikhuthaza ukuphumula esiphezulu kanye nokuqinisa uhlelo senhliziyo nemithambo yegazi futhi ethukile.
Hammam-Turkish engcono ukulungiselela umzimba ekusetshenzwa okwalandela yezimonyo.
ERoma lasendulo zokugeza wawuyingxenye ebalulekile emphakathini. Ukuzizwa ungumRoma kancane, akusho ukuthi ukuya Lomuzi Waphakade - is lula kakhulu ukuvakashela ipaki amanzi "Caribia". umusi yaseRoma lasendulo lokushisa iphansana kanye nomswakama eliphezulu in the kaldariume zendawo kabusha. Ukuhlala e-ke nethonya elizuzisa phezu ipheshana zokuphefumula nezihlanganiso, ke kunomphumela ebonakalayo ekuvuseleleni futhi ikakhulukazi efanelekayo abesifazane.
Ukususa bakhathale okugeza kanye nomuzwa ngeminako amandla ngokomzimba nangokwengqondo, ungakwazi uqhubekele phambili ezindleleni zokwelapha. Ngo amanzi park salon ubuhle, ungasebenzisa ezihlukahlukene ukubhucungwa, kuhlanganise, izinhlelo exotic eyinkimbinkimbi Cosmetology yesimanje, umzimba ezisonga, Scrubs, kanye nenqubo eziyingqayizivele uyaxebuka izinyawo ngosizo izinhlanzi-Shchipachev Garra Rufa. kungenziwa at the wezinwele usike, wafaka yokudaya izinwele zami. Ladies angasebenzisa ukwakheka amasevisi, ukuzimonyonga ukulungisa izinzipho zezandla nezezinyawo, vakashela solarium Turbo.
Akulula ukuthola inhlokodolobha yindawo lapho wayeyozalelwa emelelwa lahlukene amasevisi ezokuzijabulisa, ukungcebeleka kanye nemidlalo. Endaweni Perovo lapho amanzi eMoscow epaki "Caribia" futhi, kuvulwe izikhungo eziningi kwezokuzijabulisa, ukuzilibazisa kanye nezemidlalo. Kodwa lapho kuphela ngaphansi "Caribou" ophahleni liqukethe zonke izici bese nijabula futhi ngizigcine ngiwumqemane. Kube uye wazakhela linendlela yalo kwesisindo anti-cellulite, ngokuhlanganisa okugeza kanye nezinsizakalo yezimonyo nge ezihlukahlukene izinhlelo ukuqina. ukuqeqesha Amandla usebenzisa silinganiso ejenti ngesimo izinduku, izinsimbi kanye ezidayiswayo ahlukahlukene iqondiswe ekuthuthukiseni wonke amaqembu kwemisipha ukwandisa ukukhuthazela. Lezo zinhlelo ukukhuthaza kwesisindo, ukuqinisa uhlelo kwemisipha ne uhlelo zemisipha, ngcono ukucindezeleka ukubekezelelana.
Umusa futhi plastic
Amakilasi Uhlelo of esisuka kanye nokudidiyela ukunyakaza - esisuka, Pilates, Callanetics, yoga amakilasi ku izindlela lasendulo Chinese Uprofesa Bubnovskaya uhlelo yakhelwe ngalabo abafisa ulungise ukuma kwakho, kwandiswe ukuhamba nakalula yomgogodla nezihlanganiso, balahle esiwohlozayo disc isifo.
imisebenzi Zemidlalo isitayela umdanso unyaka nonyaka ukuthola abalandeli abaningi. Kusukela yobuningi izipesheli ukudansa izikole kanye studios dazzled. Akubona bonke nemidanso yesikole anganikeza ukuqeqeshwa okuhle ngempela, kodwa izakhamuzi zedolobha ngokwanele ukuza Green Avenue, lapho emanzini eMoscow epaki "Caribia" itholakala khona, futhi ungenele iqembu zakho ozithandayo umdanso. Dancing izifundo ngesitayela Latin, i-zumba, isiqeshana of plastic, isinyathelo Ukuvivinya umzimba ngendlela, bachata, isisu umdanso plastic ukuthuthukisa, ukuthuthukisa indlela yekuma, eguquguqukayo kanye imisipha ithoni, futhi okubaluleke - ukuthuthukisa isimo futhi unike ngokuzethemba.
Mayelana ukudla okwehla esiphundu futhi unempilo
injabulo enkulu ukuthatha yokuzilibazisa isikhungo lendawo yokudlela, ezemidlalo bar noma cafe. Yokudlela "Caribia" ikhonza Cuisine Italian futhi Georgian, inyama amakhono, inhlanzi kanye kwasolwandle, kanye nama-dessert ezimangalisayo yasekuqaleni. Izivakashi eziningi lase liqale ukuthanda le ndawo sokudla okwehla esiphundu kusukela chef kanye nenhlangano kakhulu imikhosi umndeni kanye amadili, futhi izivakashi abancane - I-imenyu enezingane ezinezidingo ezikhethekile sika.
abalandeli Active kungaba poperezhivat ngoba nezethu adle at the bar yezemidlalo "Caribou". Lapho abalandeli yezemidlalo ukubuka ukusakaza ku yonke imincintiswano ezinkulu Russian nasemazweni angaphandle, ujabulela ubhiya Ungadla ibhalwe yokubhaka ethu ibha.
Cafe ophahleni futhi ogwini
Waterpark "Caribia" iyakwamukela izimenywa yothando anti-ikhefi, sise maphakathi ophahleni. Lapho ungabukela emidlalweni nezinhlelo zokuzijabulisa, ukudlala imidlalo ebhodi. Esikhathini isikhungo inikeza free Wi-Fi, okuyinto lwaziswa ngokukhethekile yemisebenzi ovulekile.
resort abahle ngeke wacabanga ngaphandle cafe ogwini. LoMfula aqua zone "Caribou" itholakala ezindaweni amathathu angasogwini: "I-Egyptian", "Fresh Bar" futhi "Jabulela Bath yakho". Lapha ungakwazi ukuzitika on kebabs, ehla yokuqala, nezithelo ezisanda kukhiwa ezitholakala iziphuzo, nama-dessert ice cream.
Kungani kufanele uvakashele "Caribou"?
Umhlahlandlela Ezokuzijabulisa Centre wenza konke angakwenza ukuze kuqinisekiswe ukuthi indawo ozithandayo ukuzijabulisa nomndeni Muscovites waba epaki amanzi "Caribia". Amanani bavakashile yakhelwe futhi iyatholakala imindeni enezingane. Okuncane ithikithi intengo ye omdala - 1950 k. Kukhona izinzuzo emindenini emikhulu, izaphulelo for avakashele, amakhadi isipho, amakhuphoni izinsiza esibanzi, ibhonasi izinhlelo, amazinga okhethekile asebekhulile eziphansi ekubhaliseni konyaka.
Kungakhathaliseki ficiza sezulu kungenasisekelo, amanzi ipaki "Caribia" eMoscow kukunikeza wagcwalisa fun-iholidi ehlobo, futhi abasebenzi friendly ulindelwe!
Kharkiv, Liberty Square: umlando, ubungcweti, amaqiniso athakazelisayo
Tommy Hilfiger. Izicathulo ngoba amadoda angempela
Njengoba lisetshenziswe calendulakuva tincture induna.
Kungakanani ukupheka i-peas yezifundo eziyinhloko